Otu Oge Awa nke Omenala Social ... | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 4, 2012 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
E nwere bụ n'ezie a eduzi, kwa ikwu, maka Social Media. Ọtụtụ ndị folks ga-achọ ịgwa gị ihe ị ga-eme na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ Kesaa atụmatụ mmeri haMana ahụla m ya ka ọ na-arụ ọrụ dị iche iche maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla anyị na ya rụkọrọ ọrụ. Taa, Erik Deckers sooro m tweet si m Alexander Klotz:
Ihe nchoputa bu ihe ima aka nye onye obula… tinyere obere ulo ahia m. Ebumnuche anyị bụ itinye email otu izu, blọgụ abụọ kwa ụbọchị, ma gaa n'ihu na mkparịta ụka na Twitter, LinkedIn, Google+ na Facebook. Anyị na-ada ada nke ukwuu! Ọ bụ ihe ịma aka dị na anyị na-ego ọzọ akụ adịghị anya anyị elekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnga naanị iji gbalịa ịnọgide. Nke ahụ bụ kpọmkwem efu ka ụlọ ọrụ na-eleghị anya ga-ozugbo utịp ke nloghachi na ego… ma oge na-aga, m n'aka na ọ ga-.
E nwere ọtụtụ ihe onwunwe n'ebe ahụ na isiokwu ahụ. M na-agbasaghị m ihu ọma nke Jay Baer, Jason Falls na Michael Stelzner n'elu folks dị ka Hubspot maka ndụmọdụ mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na m na-eche ndị folks na Hubspot dị mma, atụmatụ ọdịnaya ha bụ atụmatụ aghụghọ inbound na-ebu ebubo. Ha na-ekerịta ihe ọmụma iji na-eduga na ụlọ ọrụ ha. Jay, Jason na Michael na-arụ nnukwu ọrụ nke ịhapụ onye na-ere ahịa (ha ga-akọwa ndị ha na-akwado ha n'ihu ọha) mana lekwasị anya n'okwu dị na mkpebi na mkpebi ndị enwere ike.
N'ezie, oge dị mma maka Alex - ịga Michael Obere Summit Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Azụmaahịa na ngwụcha ọnwa a. Nzuko ahụ kpakpando 22 na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-akụzi ndị nwe ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa otu esi ama ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi (ndị Social Media Examiner wetara gị). Ndị na-eweta ihe gụnyere Jeremaya Owyang (Ttù Altimeter), Brian Solis (onye edemede, Tinye), Ọnye na -bụ Frank Eliason? (Citigroup), Mari Smith (onye-ede akwụkwọ, Facebook Marketing), Erik Qualman (onye edemede, Socialnomics), Michael Stelzner (onye nchoputa, Social Media Examiner), Dan Zarella (onye edemede, The Social Media Marketing Book), Andy Sernovitz kwuru (ode akwukwo, Okwu onu ahia), David Meerman Scott (onye edemede, Real-Time Marketing & PR); ndị ọkachamara si Boeing, Intel, Cisco na Verizon; Jay Baer (onye-ede akwụkwọ, Ugbu a mgbanwe), Hollis Thomases (Onye edemede, Twitter Marketing), Steve Garfield (ode akwukwo, Get Seen), Mario Sundar (site na LinkedIn), na Ann Handley (MarketingProfs) - Naanị ịkpọ aha ole na ole. (Ngosipụta: Nke ahụ bụ njikọ njikọ m).
Nke a bụ ndụmọdụ m ijikwa mgbasa ozi mmekọrịta na-enweghị ihe onwunwe:
Ngosipụta n'ọtụtụ akụ dị nnọọ mma karịa otu. Esola onye ọ bụla akpọrọ guru. Anyị niile na-arụ ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ na hụrụ ụfọdụ azum mmeri, ụfọdụ ida… na ọtụtụ ugboro otu kpọmkwem atụmatụ mmeri NA ida. Na-emefu 15 nkeji otu ụbọchị na-agụ akụkọ ha na mkparịta ụka ha.
Chọta ndị na-ege gị ntị. Gbaso ndị isi, ndị ọrụ ibe, na ọbụna ndị asọmpi na ụlọ ọrụ gị bụ ụzọ dị egwu iji nweta ohere ịnweta ndị na-ege gị ntị. Soro ha na Twitter, Dika ha na Facebook, tinye ha na Circles na Google+, ọbụnakwa sonye na ụfọdụ njikọ LinkedIn. Ohere isonye na mkparịta ụka ozugbo ị mere nke a ga-abụ nnukwu. Na-emefu 15 nkeji otu ụbọchị n'ime na mkparịta ụka dị gị mkpa na azụmahịa gị.
Kpoo ọkọlọtọ gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye ndu, gwa ndị mmadụ na ị bụ onye isi na ihe kpatara ya. Ikwesighi ichere ka akpọ aha gị… ị ga-eche ogologo oge. Ana m agba ndị obere ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ ume ka ha blọọgụ, kwuo okwu, ma gosipụta ikike ha. Otu blọọgụ na-enye ebe nchekwa etiti maka ndị mmadụ ịga leta ma gụkwuo gbasara gị na ahụmịhe gị - yabụ ha nwere ike ikpebi ma ha agaghị azụ ahịa ma ọ bụ na ha agaghị eme. Ikwu okwu n ’ntabi anya n’enye gi ikike… oburu na inu ya na mbu! Na igosipụta ikike gị site na ịkekọrịta saịtị dịka Slideshare dị egwu. Na-emefu 20 nkeji otu ụbọchị na-eke ọdịnaya.
Kwalite onwe gị. Emela ide ederede, tweet ma ọ bụ melite ma tụọ anya ka ndị mmadụ bịa. Havekwesịrị ịchị ọchịchị nke nkwalite gị. Na-emefu 10 nkeji otu ụbọchị na-akwalite ọdịnaya gị. Na mbu, nke a nwedịrị ike ịrịọ ohere maka blọọgụ ọbịa, kwuo okwu ma ọ bụ ọbụna ịzụta mgbasa ozi iji nweta okwu ahụ!
Anaghị m anọ ụbọchị niile na Social Media… ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ya. M nhazi oge blog ma idokwa ngwaọrụ dị ka echekwa iji kpochapụ mmelite Tweets na Facebook na oge kachasị mma. Inwe smartphone na ihe niile m na-eji na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-emelite dị mma - mgbe m nwere ike ịpị nkeji ole na ole ebe a n'etiti nzukọ, n'okporo ụzọ, ma ọ bụ ịnwe iko kọfị, m nwere ike isonye ntakịrị.
N'ikpeazụ, nke a bụ itinye ego… ọ bụghị nzụta. Imefu otu awa otu ụbọchị agaghị ewetara gị nsonaazụ ị na-achọ. Ma iwe otu awa kwa ụbọchị maka otu afọ ga-egosi na ị bara uru. M na-agwa ndị mmadụ na-eche banyere ya dị ka ha ga-ọ bụla ọzọ ego… ọ bụla post, onye ọ bụla tweet, ọ bụla melite, ọ bụla na-akwado, onye ọ bụla na-eso ụzọ… ha niile pennies na akaụntụ gị. Ọ bụrụ n ’ịkwụsị itinye ego, ị gaghị enweta agam n’ihu nke ịchọrọ maka itinye ego gị.
Lynn Dalsing kwuru
Feb 7, 2012 na 2:57 PM
Akwa post! M hụrụ n'anya na ị na-agbaji ya n'ime gh ogwe ego. M na-ahụkarị ndị mmadụ na-enwe mmetụta na ha kwesịrị ịbụ ndị mbụ na-aza ma ọ bụ na-aza. Mgbe nke ahụ chere na ọ ga-ekwe omume, ha na-ada mbà. Maka onye na-ebidobeghị, echere m na itinye otu awa kwa ụbọchị maka otu izu na-emikpu onwe ha n'ime ihe dị ebe ahụ ma kpebie ụdị ngwaọrụ kachasị arụ ọrụ maka ha bụ ezigbo ụzọ iji daba.
Feb 7, 2012 na 6:49 PM
Daalụ nke ukwuu, @ twitter-116342558: disqus! Mgbasa mgbasa ozi bụ ọrụ siri ike, ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị nwere ọtụtụ uru mana ọ nwekwara ike ịbụ nnukwu nsogbu. Achọpụtara m na 'ịmịcha' bụ ụzọ dị mma iji rụpụta ihe mgbe ị na-achọ ilo nnukwu ọrụ ahụ! Enwere ọtụtụ ekele.
M ọgụ na mgba na-elekọta mmadụ media ahaghị nhata ebe m malitere afọ anọ gara aga… ebe ọ bụ na a isiokwu kwara ụfọdụ oké Atụmatụ na ịghọta. Jiri obi ụtọ, Susan